sidaad u noqon lahayd qof la jecelyahay | www.saaxil.tk
sidaad u noqon lahayd qof la jecelyahay
waxaad websitekan http://www.saaxil.tk uga barateen inuu idiin soo bandhigo barnaamijyo idin xiiso galiya maanta waxaan idiin soo bandhigaynaa sidaad dabeecadaada wax uga badali lahayd una noqon lahayd qof dadku jecelyihiin dabeecadiisa waa hadii aad raacdo talaabooyinkan hoos aanu idin ku sheegi doono, hadaba akhris wanaaagsan!!
Sidee sidee unoqon lahayd qof lajecelyahay una hanan lahayd asxaab wanaagsan ? Ma jeceshahay inaad noqoto sheekeeye dirac ah oo dadka oo dhan ay aad kusoo dhaweeyaan marka aad tagto meelaha bulshada isugu yimaadaan? Mase jeceshahay in gabar kaa quusatay dabeecadaada qalafsan darteed inaay dib kuu jeclaato?
Jawaabtaadu haday haa tahay bal ila aqri qoraal gaaban oo aan kasoo min guuriyey buug aad looga jecel yahay dunida aanu ku nool nahay isla markaana lagu turjumay in ka badan 40 luuqadood kaasoo loogu magac daray How to win Friends Influence People.
Saaxiibtinmadu waa xubin aad iyo aad muhiim u ah oo ruuxa aan garanayn ay aad u adag tahay inuu bulsho la dhaqmo waxaana loo baahan yahay in la illaaliyo saaxiibada aad haysato iyo in aad abuurato kuwo cusub oo wax ku ool ah.
Saaxiibtinimada waa qaali la iskama helo waxaana wanaagsan inaad ula dhaqanto Daacadnimo, Isu kaalmayn, Kudayasho, Qadarin, Tixgelin iyo waxyaabo badan oo aan halkaan kusoo koobi karin.
Waxaa muhiim ah inaad ka fiirsato marka aad tilaabo qaadayso inaay noqoto mid dadka soo jiidanayso.
Hadaba sidee baad ku ilaalin kartaa saaxiibada aad heysato isla markaana aad ku abuuran kartaa kuwo cusub bal aqri qodobada muhiimka aan u arkay.
1. Tan koowaad ee loogu horeysiiyey waxay noqonaysaa Muranka inaad iska ilaaliso inaad saaxiibadaa la muranto (Muranka sidiisa waa wax aan faa’iido lahayn wuxuuna ku dhamaadaa guul daro inkastoo marka aad muran ku guuleysato aad dareemayso xoogaa raaxo yar balse raaxadaasi makula tahay in ay kula dareemayaan ruuxa aad ka guuleysatay. Ogoow jidka ugu fiican eed ku kasban karto saaxiibo inuu yahay muranka inaad ka dheeraato.
2. Hadii aad gafsan tahay garayso gefkaaga, ha noqon ruux mar waliba isla saxsan dabcan wey dhacdaa in badan in ruux qaldan inuu og yahay gafkiisa misana uu iskala weyn yahay inuu yiraahdo waan gafsanahay waxaana u diidaya fakarka isla weynida kugu jirta taasina kuuma wanaagsan.
3. Qof kastaa oo dunida ku nool u muuji Xurmo Ra’yiga qofka kale hana ku dhihin waad gefsan tahay waxaad badalkeeda ku dhihi kartaa ”Aniga arrinka waxaan ka arkaa dhan kale sidaasi iilama muuqato ruuxaasi dhanka aad ka fiirisay ayuu isna markiisa ka eegayaaa”.
4. Ka dheeroow marwaliba isticmaalka erayga ”MAYA”, weydii sheekeeyahaaga erayo lagu jawaabi karo ”HAA” sida hadaad doonayso inaad wax u sheegto oo uu ku qanci karo.
5. Dadka kula sheekeysanaya marka ay hadlayaan haka dhex galin hadalkooda xitaa hadii ay kugu soo dhacaan wax muhiim ah, adiga ha noqonin mid sheekada macaansado oo kaligii waqtiga qaata wax kasii dadka kale ee hadalka kula wadaaga.
6. Ku isticmaal hadalo macaan iyo dabeecada wanaagsan iskana jir Carrada iyo isqaad-qaadka ”Isla weynida” uma fiicna jiritaankaaga.
7. Hadii ruux uukaa soo horjeedo ra’yigaaga u sharax marka hore ka dib ha moodo in fakarka yahay tiisa adiga muhiimadaada waxay tahay in fakarkaasi hirgalo.
8. Hadii ruux talo ama fakar kuu keeno ka hor imaanin isku day inaad dhankiisa ka eegto arrinka meesha qofka kale ka arkaayo, hana is tusin in arrinka aad adigu wadato ay ka saxan tahay tan qofka kale.
9. Tixgeli fikrada qofka kale una muuji rabitaankaaga, waxaad doonayso ruuxa u sheeg adigo tixgelinaaya fikirkiisa.
10. Ku isticmaal dabeecadaada wanaagsan, sida sharafta, raganimada, geesinimada iwm. si aad u kasbato saaxiibo fiican.
11. U matal fikradahaada sida riwaayadaha oo kale yacni adigoo jilaaya, waa in ay leedahay fikradu Ujeeddo, meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhamaato, hana ku jireen qeybo farxad galin kara ruuxa kale.
12. Gaarsii arinka meel aan laga soo noqon karin arrinta aad doonayso marka hore adigu soo bislee kaligaa kadibna ruuxa uga dhaadhici illaa uu ka gaaro meel uu kuqanci karo.
13. Keen talooyin wanaagsan hana soo saarin ammaro mutaxan, ha noqon mid yeesha sida ammar la bixinayo, kusalee nooc talo ah oo idinka dhaxaysa.
14. Ka hadal gafkaaga intaadan qofka kale dhaliilin, adigu marka hore ka dood waxaas kaligaa naf ahaantaada.
15. Ha ka fiiqin wajiga qofka kale hadii uu gaf galay xitaa hadii uu yahay cadawgaaga.
16. Ku tilmaan qofka kale sifo wanaagsan, wuxuu ku da’daali doonaa sidaada oo kale ”Bani’aadamka waxa uu ugu jecel yahay ayaa ah amaanta”
17. Ku dhiiri gali oo amaan balaaran u soo jeedi wax kastoo aad ku aragto oo wanaag ah oo uu sameeyo.
18. Jeedi talooyin asluub leh, hana soo saarin ammaro mutaxan xilliga kasbashada.
19. Bixi qiimeyn daacad ah, adigoon ka leexan runta ama xaqiiqda.
20. U dhaaf qofka kula nool ha ku dhaqmo dabeecadiisee, haduu leeyahay nooc ka badalan dabeecadada ha u arkin mid khaldan oo aad kuu dhibaysa.
21. Saaxiibka wanaagsan waa kan daacada kuu ah mar waliba ee kula wadaaga wax kastoo kula soo darsa.
wixiii faahfaahina ama fikir ah eee aad nagula talin lahayd fadlan noogu soo dir cinwaankan
Previous Post maahmaahyada somaliga